हजारौ नेपाली भएको ठाउँ जापानमा १९५८ यताकै शक्तिशाली भूकम्प र आँधी आयो, झन्डै ५१ लाख मानिसहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो ! - Nepal Insider
Home/समाचार/हजारौ नेपाली भएको ठाउँ जापानमा १९५८ यताकै शक्तिशाली भूकम्प र आँधी आयो, झन्डै ५१ लाख मानिसहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो !
8,418 1 minute read
यो आँधी २१६ किलोमिटर प्रतिघन्टाको दरमा अगाडी बढिरहेको छ । यसको प्रभावले आँधी प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति बन्द भएको छ भने कतिपय ठाउँमा खानेपानीको पनि अभाव हुन थालेको खबरहरु आउँन थालेका छन् ।त्यस्तै धेरै ठाउँमा कलकारखाना तथा पसलहरु पनि बन्द छन् । आँधीका कारण टोकियो शहरसहितका अधिकांश क्षेत्रमा डुवान छ भने विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको छ । उद्योग, कलकारखाना र पसलहरू पनि बन्द छन् ।
नेपालीहरुको स्थिती के छ ? –नेपाली दुतावासको तथ्यांक अनुसार जापानमा करिब ९० हजार नेपालीहरु बसोबास गर्छन् । यो संख्या जापानभर बसोबास गर्ने नेपालीहरुको हो । टोकियो लगायत नेपाली बसोबास रहेको स्थान आँधीको प्रभावमा रहेको कारण नेपालीहरु पनि प्रभावित भएका छन् ।